တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရူနိုင်း ဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် သံတမန်များအဖွဲ့ နာယက ဖြစ်သူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Pehin Orang Kaya Seri Pahlawan Dato Paduka Haji Abdu’r Rahmani bin Dato Paduka Haji Basir ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ တာဝနျပွီးဆုံး၍ ဘရူနိုငျးဒါရုဆလမျနိုငျငံသို့ ပွနျလညျထှကျခှာတော့မညျ့ သံတမနျမြားအဖှဲ့ နာယက ဖွဈသူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဘရူနိုငျးဒါရုဆလမျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Pehin Orang Kaya Seri Pahlawan Dato Paduka Haji Abdu’r Rahmani bin Dato Paduka Haji Basir ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဘရူနိုငျးဒါရုဆလမျနိုငျငံ သံအမတျကွီး တို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျခဲ့ကွသညျ။